Dalxiiska Dalxiiska Gudaha ayaa laga filayaa New Zealand iyadoo la cusbooneysiiyay adeegga hawada Auckland- Invercargill
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Dalxiiska Dalxiiska Gudaha ayaa laga filayaa New Zealand iyadoo la cusbooneysiiyay adeegga hawada Auckland- Invercargill
Airlines • Airport • Jebinta Wararka New Zealand • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Invercargill waa magaalo ku dhow cirifka koonfureed ee Jasiiradda South Zealand ee New Zealand. Waa irrid loo maro aagagga cidlada oo ay ku jiraan Stewart Island, iyo Rakiura Track. Queens Park waxaa ku yaal bandhigyo ubax iyo tas-hiilaad isboorti. Magaalada gudaheeda, Bill Richardson Transport World wuxuu soo bandhigayaa gawaari badan oo guryo ah. Koonfur-bari, Waituna Lagoon waxay hoy u tahay shimbiro badan iyo dad kalluun badan leh.
Air New Zealand ayaa ugu dambeyn dib u bilaabi doonta adeegyadeeda A320 inta udhaxeysa Auckland iyo Invercargill galabnimada Isniinta.
Adeeggan, oo markii ugu horreysay la bilaabay Ogosto 2019, wuxuu ka dagi doonaa Waqooyiga Jasiiradda 12:40 pm iyadoo soo noqoshada Invercargill ay noqoneyso 1:25 pm. Hore u socoshada, adeeggu wuxuu shaqeyn doonaa Isniinta, Khamiista, Jimcaha, iyo Axadda.
Dib-u-bilaabiddu waa xilli kale oo muhiim ah iyada oo shirkaddu ay dib u dhis ku sameysay shabakadeedii ku aaddanayd bartilmaameedkeedii ahaa in ay dib ugu soo laabato 55 boqolkiiba awoodda bisha Ogosto.
Duqa magaalada Invercargill Tim Shadbolt ayaa sheegay inay "muhiim u tahay" soo kabashada dhaqaalaha dalka in dadku ay bilaabaan inay dib u bilaabaan sahaminta qaranka.
Air New Zealand waxay sidoo kale dib u bilawday adeegyadeeda wadada Wellington-Invercargill maalintii Axada, iyada oo hal adeeg celis maalinle ah Q300.
Bishii Juun, Duulimaadyada Australiya waxay soo tebisay sida Air New Zealand ay ugu fidin doonto awood dheeraad ah wadada ay mareyso Auckland-Queenstown inta lagu jiro fasaxyada iskuulka ee bisha July bisha soo socota marka loo eego tii sanadkii hore.
Ogeysiiska waxaa sii dheer kororka guud ee awooda gudaha dhowr wado, oo ay ku jiraan duulimaadyada aadaya iyo kuwa ka tagaya Auckland ilaa Wellington, Dunedin iyo Queenstown, Wellington ilaa Christchurch iyo Dunedin iyo Queenstown.
Madaxa dalxiiska Air New Zealand, Reuben Levermore, ayaa yiri, “Markii aan bilownay duulimaadka diyaaradaha sanadkii la soo dhaafay, ma aanan weydiisan karin jawaab aad u xamaasad badan bulshada Southland oo si buuxda u og qiimaha ay leedahay xiriirka tooska ah ee naga dhexeeya magaalada ugu weyn iyo marinka caalamiga ah.
Sidoo kale, ma jirin waqti ka wanaagsan oo ay Aucklanders la kulmaan meelo caan ah oo laga tago New Zealand iyo khibrado ay ka mid yihiin Stewart Island, Fiordland, Catlins Coast, ama Invercargill mecca. ”